Vehivavy shinoa mampiaraka - Personals ao Shina
Vehivavy shinoa mampiaraka — Personals ao Shina
Ny fahalalana mikasika ny Shinoa mampiaraka ny kolontsaina dia ny manao na mandika ny fikarohana ho an’ny Shinoa mpiara-mitory tamiko. Ny fahafantarana ny fomba fitetezana ny lalana amin’ny alalan’ny fitsipika fototra dia hamonjy anareo ny sasany ny olana ary hanampy anao hahazo ny zavatra tsara.
Efa nanangona ny lisitry ny tsara indrindra Shinoa mampiaraka toerana sy ny fampiharana, dia afaka manomboka fivoriana ny vehivavy dia ela. Satria ianao dia an’arivony kilaometatra izy dia tsy midika hoe tsy misy fifandraisana mety.
Misy fahasamihafana eo amin’ny rosiana sy ny Sinoa vehivavy? Mazava ho azy
Izy ireo avy amin’ny firenena roa samihafa amin’ny kolontsaina samihafa. Na dia eo aza izany, ireo firenena roa ireo dia handeha hanipy ho an’ny olona mitady mba hanoboka ny tongony ho any amin’ny iraisam-pirenena ny fiarahana amin’ny dobo. Indrindra mampitaha ny vehivavy Shinoa sy Filipinas amin’ny mijery fotsiny rehefa mamaritra ny safidin’ny fa misy kokoa ny fepetra mba handinika raha ianao rehefa lehibe fifandraisana.
Indro ny fampitahana ara-drariny
← Vahiny izay tsy Menatra Maneho ny Fomba Mora mba Hahazatra Ny amin'ny Ankizivavy ao Shina
Damaody Mampiaraka Fampiharana any Sina →